> Resource > Video > Sida loo sameeyo Video ah Screen Multi
Waxyeelada multi screen waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in video qaadashada haddii in ka badan hal xidhmo oo images ama videos lagu soo bandhigi doonaa si isku mar ah si ay u sheegaan sheeko ama gaadhsiin macluumaad dheeraad ah. Si aad u samayso video ah screen multi, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan. Sidaa daraadeed, kaliya aad u baahan tahay in aad ku darto video clip aad rabto inaad ka dahaadhaa sida aad sawirka-in-sawir gal waqtiga, ka dibna waxa ay u taagan doonaa video aad rabto in aad u adeegtaan sida asalka ah ee video kor ku xusan. Hoos waxaa ku tip a inuu kaa caawiyo inaad si fiican u fahmaan sida loo sameeyo a screen video multi.
1 dar video ama image aad rabto in lagu dahaadho
Ka dib markii socda software this, guji "Import" in ay dajiyaan aad video ama image barnaamijka. Markaas dooran faylasha aad rabto inaad ka dahaadhaa in track PIP ah, waxaad heli doontaa ah cayriin multi screen video.
2 shakhsiyeeyo multi aad screen video
Markaas shakhsiyeeyo multi aad screen video sida aad jeceshahay. Double guji file bartilmaameedka iyo dooran "Advance" si uu uga multi aad screen video dheeraad ah oo cad oo ay ku daray saamaynta badan ama qabsato xajmiga iyo meelaynta ah ee clip. Waxaad awoodi doontaa in aad aragto boos iyo isbedelka size ee suuqa kala Falanqeynta dhinaca midig ee sanduuqa hadal Raadka.
Markii wax walba la soo bandhigo sida aad u rabto in, si fudud u xirto sanduuqa wada hadal iyo codsan isbeddelka. Markaas riix "Play" icon iyo ku eegaan aad filim, oo waxaad arki doontaa in aad dib-u-xajmi iyo dib-u-taagan video clip dahaadhay on top of clip weyn.
3 Save ama wadaagaan multi aad screen video
Haddii aad ku faraxsan yahay natiijada ay yihiin, guji "Abuur" si loo badbaadiyo ama la wadaagto multi aad screen video. Halkan waxa ku jira dhawr fursadood oo wax soo saarka aad u:
Device: Dooro ka qalab kala duwan oo aad u hesho videos screen multi filaayo. Markaas riix badhanka xagal yar in la beddelo goobaha sare sida video iyo encoder audio, heerka jir, heerka yara, iwm
Qaabka: badbaadi screen multi video dhammaan qaabab video caan ah sida AVI, wmv, MOV, FLV, MP4, MKV, MPEG, iwm
YouTube: Buuxi macluumaadka account YouTube iyo macluumaad video si ay u wadaagaan shaqadaada on YouTube si toos ah.
DVD: Calan-beegyada uu DVD sida DVD calaamadda, Video Tayada, TV Standard iyo muuqa ah, ka dibna si DVD gubi video.
Waxaad arki, abuurista a video screen kala duwan ee Filmora u sahlan yahay. Isticmaal habka la mid ah in ay ku riday images shaashadda, sidoo kale si fudud aad ku dari kartaa logo u gaar ah si ay u videos.